चर्चित र्‍यापर भिटेन पक्राउ | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : ७ कार्तिक २०७६, बिहीबार १२:१६
काठमाडौं : चर्चित र्‍यापर भिटेन पक्राउ परेका छन्। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले बिहीबार उनलाई पक्राउ गरेको हो। गीतमा राखिएका शब्दले समाजमा नकारात्मक सन्देश दिएको भन्दै उनलाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले जनाएको छ।
एसपी केदार ढकालका अनुसार भिटेनलाई पक्राउ गरेको पुष्टि गरे।उनीमाथि आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको एसपी ढकालले जानकारी दिए। उनको ‘हामी यस्तै त हो नि ब्रो ‘ गीतबाट चर्चित बनेका थिए। गीतमा ‘पुलिस चौकीभित्र गर्छु दारु खाँदै मस्ती’ लगाएतका शब्द छन् । उनले चुरोट, गाँजा लगाएत निषेधित लागुऔषध प्रयोग गर्न प्रोत्साहन हुने गरी गीत गाएको र अश्लिन शब्द प्रयोग गरेको आरोप रहेको छ ।
उनले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक अकाउन्ट भिटेनमा प्रहरीको बर्दी लगाएर चुरोट तानिरहेको र हातले गाँजा केलाइरहेको तस्बिर अपलोड गरेका थिए ।
यसअघि गायक दुर्गेश थापालाई पनि निषेधित लागुऔषध गाँजा प्रयोग गर्न दुरुत्साहन गर्ने गरी गीत गाएकाले मंगलबार पक्राउ गरिएको थियो। उनले गीत हटाएपछि थापालाई छाडिएको थियो। विवादित गीत युट्यूवबाट हटाइएको छ। लागु पदार्थ सेवन गर्न प्रोत्साहन गरेर गीत गाउनु कानुन विपरित भएको र सामाजिक मूल्य-मान्यता विपरित भएको भनी चर्काे गीतकाे आलोचना भएको थियो। सो समयमा भिटेनलाई पनि पक्राउ गरेर कारबाहि गर्नुपर्ने माग सामाजिक संजालमा व्यक्त भएका थिए।
स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई अपमान गर्नेलाई कारबाही गर्ने, कोरोना रिपोर्टको आधारमा मात्र जिल्ला प्रवेश गर्न पाइने
व्यक्तिगत स्वास्थ्य सतर्कताको नाममा स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीमाथि दुव्र्यवहार गर्नेलाई पक्राउ गरी कानूनी कारबाही गरिने